Budh-cad Weeraray Raheem Sterling Oo Xabsiga Loo Taxaabay
HomeWararka MaantaBudh-cad Weeraray Raheem Sterling Oo Xabsiga Loo Taxaabay
Nin ku caan ah xaalad abuurka garoomada kubadda cagta ayaa xabsiga loo dhigay kadib markii uu si bilaa ujeedo ah u weeraray ciyaaryahanka naadiga Manchester City iyo xulka qaranka England baasha uga ciyaara ee Raheem Sterling.
Karl Anderson, oo 29 sano jir ah, ayaa qirtay inuu weerar toos ah oo aan gabasho lahayn ku qaaday ciyaaryahanka oo ku sugan garoonka tabobarka kooxda City maalinimadii Sabtidii.
Maxkamad la hor keenayna waxay dhagaysatay dacwadii lagu soo oogay, oo lagu sheegay inuu hore ugu lug lahaa 25 fal dambiyeed oo kamid 37 weerar oo la fuliyey, kuwaas oo ay ku jireen, weeraro lagu khal-khal galiyey ciyaaraha kubadda cagta.
Waxa uu xabsi ku jiray mudo afar bilood ah, waxaana laga qaaday lacag mag dhaw ah oo £100 (boqol Giniga Ingiriiska ah).
Anderson, oo afar jeer laag ku dhuftay Sterling intii weerarku socday, ayaa ku andacooday inuu “miyir la’aa” markii uu falka geysanayay isla markaana uu raali galin buuxda ka siinayo ciyaaryahanka ficilkaas foosha xun.
Dagaalka wuxuu u raaciyey aflagaado uu u adeegsaday weedho nacayb ah, sidoo kalena wuxuu ku yidhi Sterling, inuu jeclaan lahaa in hooyadii iyo ubadkiisuba ay dhintaan.
War murtiyeed uu maxkamada ka hor akhriyey dhibanuhu, oo ah 23 jir Sterling, ayuu ku sheegay inaanu “waligii ku fikirin in hab dhaqan noocan oo kale ahi ka dhici karo wadanka, ilaa maanta iyo ilaa maalintii uu dhashay “.
Muuqaalo laga soo min-guuriyey kamaradaha qarsoon ee CCTV –ga oo duubay dagaalka ka dhacayay barxada hore ee garoonka tabobarka naadiga City, ayaa lagu dhex daawaday maxkamada dhexdeeda, kuwaas oo muujinayay – Anderson oo korka kaga boodaya baabuurka gaarka ah ee Sterling oo uu isna ku dhex jiro.
Xukun Rumaan ah ayaa lagu riday, xaakimkii ku dhawaaqaysay xukunkiisa oo lagu magacaabo Diana Webb-Hobson ayaa ku sifaysay falka “guud ahaanba weerar macno daro ah ” waxaanay ku qeexday falalkii hore loogu diwaan galiyey looguna xukumay Anderson inay ahaayeen, kuwo “argagax leh”.
Anderson, oo degen xaafada Woodward ee magaalada Manchester, ayaa isagoo dhoola cadaynaya laga furay ‘xayndaabkii uu maxkamada dhexdeeda kaga xaraysnaa.
Pep Guardiola Oo Difaacay Claudio Bravo Kadib Guushii Darbiga Manchester
Leicester City Oo Adhaxda Ka Jabisay Man City Lix Dhibcood Oo Nadiif Ahna Ka Jiidatay